‘It’s Dangerous Beyond The Blankets’ ဆိုတဲ့ Variety Program တစ်ခုမှာ အတူတူမြင်တွေ့ရဉီးမယ့် IKon ရဲ့ Junhoe နဲ့ Wanna one ရဲ့ Kang Daniel
On March 9, 2018 March 9, 2018 By shwe yi
‘It’s Dangerous Beyond The Blankets’ ဆိုတဲ့ MBC ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ Variety Program တစ်ခုကတော့ နယ်ပယ်အစုံက အနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူ အိမ်တစ်အိမ်တည်းမှာနေပြီး တစ်ဉီးနဲ့တစ်ဉီး ရင်းရင်းနှီးနှီးလုပ်ဆောင်ရမယ့် Activities တွေနဲ့ အားလပ်ရက်တွေကို အတူဖြတ်သန်းရမယ့် အစီအစဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Variety Program ရဲ့ Season 1 ကို သြဂုတ် ၂၀၁၇ ကစတင်ခဲ့ပြီး Cast member တွေအဖြစ် Xiumin (EXO), Park Jae Jung, Yong Jun Hyung (Hightlight), သရုပ်ဆောင် Lee Sang Woo နဲ့ Wanna One ရဲ့ Kang Daniel တို့ကပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခု Season2မှာ Kang Daniel က original cast member အဖြစ်ပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပြီးနောက် ဒီနေ့ မတ်လ ၉ ရက်နေ့မှာတော့ iKon ရဲ့ Junhoe ကလည်း Cast member အဖြစ်ပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို MBC က Confirm ခဲ့ပါတယ်။
Admin ကတော့ Junhoe နဲ့ Kang Daniel တို့ နှစ်ယောက်လုံးက အစားပုတ်လေးတွေဆိုတော့ ဒီ Program မှာ ဘယ်လိုတောင်အစားပုတ်ကြမလဲဆိုတာပဲ ကြည့်ချင်မိပါတယ် ? ကဲ.. အဲဒီတော့ Wannable နဲ့ IKonic တို့ရေ.. ကိုယ့် Bias တွေရဲ့ အမှန်အကန်တွေကို တွေ့မြင်ကြရတော့မှာပါလို့ပြောကြားရင်း Stay Tuned ပါလို့ !!
တစ်ခုခုထူးတာနဲ့ Fan.. Fan တို့ကို လက်တို့ပေးမှာမို့ Admin တို့ Page လေးကို ခဏခဏလာလည်ပေးကြပါဉီးလို့ !! ?
A post shared by Wanna One 워너원 (@wannaone.official) on Sep 9, 2017 at 4:02am PDT
A post shared by 구준회 (@juneeeeeeya) on Feb 7, 2018 at 8:33am PST
PREVIOUS POST Previous post: K-Pop Idol အဖြစ်အောင်မြင်လာခဲ့ပြီးနောက် မိခင်နိုင်ငံမှာလည်း မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် အောင်မြင်လာကြတဲ့ Idol ၁၀ ယောက်
NEXT POST Next post: ချစ်သူနဲ့ အတူလက်တွဲပြီး hiking လုပ်ခဲ့တဲ့ Taylor Swift